တေမိယ ~ မြန်မာ့သံစဉ်စာသားများ
လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါ ဝေနေယျတို့ ကယ်တင်လိုသော ဆန္ဒ ရှိတာအမှန်ပါ ထီးစည်းစိမ် နန်းစည်းစိမ် ( မခံစား လို )၂ သဗ္ဗညုတ ရွှေဥာဏ်တော်ကို အလိုရှိ၍ တေမိယ ဆုပန်ရှာ….
( တေမိမင်းရာဇာ ထီးမွေနန်းမွေ အလိုမရှိပါ အို ငရဲကြောက်၍ အသည်းပေါက်မတတ် ပူပန်ရှာ )၂ (ထီဖြူစောင့် နတ်မယ်သူဇာ သတိပေးရောက်လို့လာ ဆွံ့ အ ချင်ယောင် ဆောင်ပါ နားထိုင်း၍ အေးအေးညင်သာသာ )၂ စိတ်နွမ်းပါလို့ နေတော့တာ ကိုယ်စွမ်းတာလည်း မပြပါ အလောင်းတော်မှာ အတန်တန် အဓိဋ္ဌာန်ကို ပြုနေရှာ….
( ဖခမည်း အာဧာ မှူးမတ်တွေက အလိုတော်စမ်းတာ ငိုရိုဖို့ရာ )၂ (တေမိယ သနားစရာ အစာငတ် ထားတာ လသား အရွယ်က ဖြည့်ဆည်းပူးခဲ့ရှာ )၂ နန်းတွင်း လှတဲ့သူတွေ ဘယ်လိုမြှူသော်လည်း အလောင်းတော် မတုန်လှုပ်ပါ ဆယ့်ခုနှစ်နှစ် အရွယ်မှာ ပယ်ရှားတာ…
( အချိုပွဲ အချဉ်ပွဲနဲ့ ပွဲတော်အုပ်အနားမှာ အလောင်းတော်ကြီးရှေ့တော်ကပင် ထား တာ တပ်မက်အောင်လို့သာ )၂ ( မယ်တော်မှာ မချမ်းမြေ့ မြင်ရ၍ မသက်သာ မျက်ရည် မစဲ ရှာ )၂ အတန်တန် ချော့မော့ သားတော်ပြောပါ စကားဆိုရင် တစ်ခွန်းလောက် ကြားချင် နေတာ မယ့်သည်းချာ….
( မြတ်သင်္ကန်းနဲ့ ပျော်ရွှင်မှာ အလိုပြည့်အောင် ကျင့်ဆောင်ခဲ့တာ )၂ ငြီးငွေ့ရှာ ထီးရဝေပါ တေမိယ အလောင်းတော်မြတ် တောထွက်လာ…။